Semalt Expert: 5 Zvishandiso Zvokurega Spam Mhinduro MuShokoPress
Spam mazwi ndeyechokwadi chinotyisa, uye avo vanobhururuka vachanyongedzwa nehurukuro yakawanda yemashoko asina maturo anogamuchira zuva. Zvisinei, WordPress ndiyo yakanakisisa yehuwandu yekugadzirisa hurumende inogona kubatsira kubvisa zvinyorwa zve spam. Kana iwe wakasiya dambudziko iri risina kutarisirwa, mhinduro dze spam dzinogona kuwana dhesi yebhurogi rako uye inogona kukubvumira kubva mitsva yekutsvaga injini zvachose.
Pano Jack Miller, nyanzvi inotungamira kubva ku Semalt , ataura pamusoro pezvigadzirwa zvekuvhara mhinduro dze spam muShokoPress.
Unogona nyore kusvika kuAkismet mune yako Wordpress Plugin Directory. Iyo inodhura-inoshanda uye inobatsira plugin, inowanzoiswa pakarepo. Yakagadzirwa na Automattic, iyi plugin yakasimba kwazvo uye inouya nemhando dzakawanda dzasarudzo. Iyo inodzivirira spam uye inoshandisa ma chati maviri kuti uone kunaka kwemashoko yako nzvimbo inogamuchira. Iinewo mamwe maitiro ekudzidzira spam ekuongorora maitiro uye anokuita kuti uise mazano pamusoro peAkasism server, pasina kupa iwe nzvimbo yako isingaoneki uye yebenzi kutarisa. Zvinoshamisa kuti Akismet inouya nepamusoro pe 40k spam checks mwedzi mumwe nomumwe uye yakakwana kumablogi evanhu uye kwete mazita ewebsite.
2. WP-SpamShield Anti-Spam plugin:
Iri plugin inowanikwawo mu Wordpress Plugin directory uye ine mamiriyoni maviri anoshingaira anosvika ikozvino. Iri plugin rave rakakurudzirwa neShokoPress musheeri Matt Mullenweg uye harina mari. Zvinotarisira kutarisa maIndaneti iyo yakaparadzira malware online, inotora mazwi ako, uye inocherechedza hutano hwemashoko iwayo. Ichakuratidzawo mazita ezviverenda zvevhiki nevhiki uye mabasa e spam kuitira kuti iwe uve nehana yekuti bhajiti yako iri kuenda.
CleanTalk ndechimwe chezvinhu zvinotonhora zvikuru, zvakanakisisa, uye zvakakurumbira zvinotanga kuwanika paIndaneti uye zvinopa rubatsiro rwakabatanidzwa kune vanoblogi uye webmasters. Iyo inodzivirira mitemo ye spam, kuregererwa kwepamutemo, uye mabhiiyo, uye inoshandisa smart algorithm kuona yese spam pawebsite yako. Iyo inoponesa zvinyorwa zvepa spam muDesitendi Yakachena yeVatauri uye inovasiya kana isiri kushandiswa.
Ndiyo imwe yemapulagi akadzivirira uye akawandisa ekudzivirira spam kusvika nhasi.
Unogona nyore kuchengetedza WordPress yako blog kana webhusaiti yakachena, yakachengetedzwa uye yakarongeka nemapapu akazara Source .